အိန္ဒိယဝတ်စုံလေးနဲ့ ကျော့ရှင်းစွာ လှရက်လွန်းနေတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ထုတ်ပြပြီး ပရိသတ်တွေကို မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်တဲ့ ၀တ်မှုံရွှေရည် – Cele Top Stars
အိန္ဒိယဝတ်စုံလေးနဲ့ ကျော့ရှင်းစွာ လှရက်လွန်းနေတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ထုတ်ပြပြီး ပရိသတ်တွေကို မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်တဲ့ ၀တ်မှုံရွှေရည်
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ.. အနုပညာလောကမှာ မြင်သူပရိသတ်တွေ တိုင်းက အချစ်ပိုနေကြရတဲ့ သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီမင်းသမီးချောလေးကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပြည်သူ့အသည်းကျော်လေး ဝတ်မှုံရွှေရည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားတတ်သလို ကျရာဇာတ် ရုပ်တွေငိုလည်း ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တံ ရွှေကစ်လေးဟာ အကယ်ဒမီဆုတွေအပြင် ပြည်ပနိုင်ငံတွေက ချီးကျူးပေးအပ်တဲ့ ထူးချွန်ဆုတွေကိုကပါ ရရှိထား သူလေးပါပဲ..။
ယောက်ျားလေး မိန်းကလေးမရွေး အားလုံးက သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ရပြီး ချစ်စရာ ဟန်ပန်ပုံရိပ်လေးတွေကို အမြဲဝေမျှတတ်တဲ့ ရွှေကစ်လေးကိုတော့ အခုတစ်ခါမှာ အိန္ဒိယဝတ်စုံလေးနဲ့ ကျော့ရှင်းစွာ လှရက်လွန်းနေတာကို ပရိသတ်တွေအားလုံး မြင်တွေ့ရမှာပါနော်..။ သူမရဲ့ ဖြူဖွေးဝင်းဥနေတဲ့ အသားအရေလေးနဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ အိန္ဒိယဝတ် စုံလေးကို ဝတ်ဆင်ကာ နိုင်ငံခြားသူလေးတစ်ယောက်လို လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ ရွှေကစ်လေးရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့ ပရိသတ်တွေလည်း သဘောကျ အချစ်ပိုနေကြဦးမှာပါ..။
“ဘယ်ကြော်ငြာထဲက ပုံလေးတွေလဲ သိလား ?????..” ဆိုပြီး တမျိုးလေးဆွဲဆောင် မှုတွေရှိလွန်းတဲ့ သူမရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း ရွှေကစ်လေးက ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှထားတာဖြစ်ပြီး အားလုံးက သဘောကျနေကြတာပါ..။ အိန္ဒိယသူလေးလို ကျော့ရှင်းတဲ့အလှတရားတွေနဲ့ မြင်သူပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုစေတဲ့ ပြည်သူ့အသည်းကျော်မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်ရဲ့ လှရက်လွန်းနေတဲ့ ချစ်စရာပုံလေးတွေကိုလည်း တင်ဆက်မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော်..။
ခဈြပရိသတျကွီးရေ.. အနုပညာလောကမှာ မွငျသူပရိသတျတှေ တိုငျးက အခဈြပိုနကွေရတဲ့ သရုပျဆောငျအကယျဒမီမငျးသမီးခြောလေးကတော့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပွညျသူ့အသညျးကြျောလေး ဝတျမှုံရှရေညျပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဖမျးစားတတျသလို ကရြာဇာတျ ရုပျတှငေိုလညျး ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျတံ ရှကေဈလေးဟာ အကယျဒမီဆုတှအေပွငျ ပွညျပနိုငျငံတှကေ ခြီးကြူးပေးအပျတဲ့ ထူးခြှနျဆုတှကေိုကပါ ရရှိထား သူလေးပါပဲ..။
ယောကျြားလေး မိနျးကလေးမရှေး အားလုံးက သညျးသညျးလှုပျ ခဈြရပွီး ခဈြစရာ ဟနျပနျပုံရိပျလေးတှကေို အမွဲဝမြှေတတျတဲ့ ရှကေဈလေးကိုတော့ အခုတဈခါမှာ အိန်ဒိယဝတျစုံလေးနဲ့ ကြော့ရှငျးစှာ လှရကျလှနျးနတောကို ပရိသတျတှအေားလုံး မွငျတှရေ့မှာပါနျော..။ သူမရဲ့ ဖွူဖှေးဝငျးဥနတေဲ့ အသားအရလေေးနဲ့ လိုကျဖကျလှနျးတဲ့ အိန်ဒိယဝတျ စုံလေးကို ဝတျဆငျကာ နိုငျငံခွားသူလေးတဈယောကျလို လှသှေးကွှယျနတေဲ့ ရှကေဈလေးရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေိုတော့ ပရိသတျတှလေညျး သဘောကြ အခဈြပိုနကွေဦးမှာပါ..။
“ဘယျကွျောငွာထဲက ပုံလေးတှလေဲ သိလား ?????..” ဆိုပွီး တမြိုးလေးဆှဲဆောငျ မှုတှရှေိလှနျးတဲ့ သူမရဲ့ ခဈြစရာပုံရိပျလေးတှကေိုလညျး ရှကေဈလေးက ပရိသတျတှကေို ဝမြှေထားတာဖွဈပွီး အားလုံးက သဘောကနြကွေတာပါ..။ အိန်ဒိယသူလေးလို ကြော့ရှငျးတဲ့အလှတရားတှနေဲ့ မွငျသူပရိသတျတှကေို အခဈြပိုစတေဲ့ ပွညျသူ့အသညျးကြျောမငျးသမီးခြောလေး ဝတျမှုံရှရေညျရဲ့ လှရကျလှနျးနတေဲ့ ခဈြစရာပုံလေးတှကေိုလညျး တငျဆကျမြှဝပေေးလိုကျ ပါတယျနျော..။